Indlela yokubeka i-Orientation kwi-Android's Display
Uninzi lweeapps kwi-Android yakho, kwaye mhlawumbi nescreen seKhaya uqobo, sinokutshintsha umboniso njengoko uguqula i-Android phakathi komzobo kunye nokuma okuthe tyaba. Ungayitshixa loo ntetho, ukuba uyafuna. Mamela izikhokelo:
Khetha ukujikeleza kwesixhobo. Ukuba kukho imfuneko, thinta i-chevron ngento ephambili ukuze ufumane into yokujikeleza kwesixhobo.
Izinketho zinokubandakanya ezimbini okanye nangaphezulu kwezi zilandelayo:
Jikelezisa imixholo yesikrini. Esi sixhobo sijolisa kwiscreen ukuze silingane nokuba loluphi ulwalathiso oluphezulu.
Hlala kumboniso wePortrait. Isixhobo sihlala kumboniso wePortrait, umboniso oqhelekileyo kwifowuni ye-Android.
Hlala kumbono weLandscape. Isixhobo sibambe kwinkangeleko yomhlaba, esemgangathweni kwithebhulethi ye-Android.
Hlala kuqhelaniso lwangoku. Isixhobo sihlala kwindawo ekuyo ngoku.
Ukuba awuboni naluphi na olu khetho, jonga kwiDraw yokuSeta ngokukhawuleza. I icon ejikelezayo ifunyenwe apho, ekuvumela ukuba utshintshe phakathi kokujikeleza ngokukhululekileyo isikrini sokuchukumisa kwaye usitshixe kwindawo enye okanye enye.
Iapp yokuDlala iiNcwadi inikezela ngolawulo lwayo lokuqhelaniswa kwescreen, esenza ukuba kube lula (kwaye kuqikeleleke ngakumbi) ukufunda i-eBook.
fumana ubude be-arc
Ukukhutshwa kwe-molar emva kononophelo
yintoni isindisa umhlaba onqabileyo
I-lorazepam ngokuthelekiswa ne-xanax
yintoni i-sandalwood ebalulekileyo yeoyile efanelekileyo
ungathatha ibuprofen kunye neasprini kunye